Fomba Fitaizana Mandaitra Amin’ny Ankizy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | NAHOANA NY ANKIZY NO LASA TSY VOAFEHY?
TENA sarotra ny mitaiza. Vao mainka anefa sarotra ilay izy, raha tsy faizina ny ankizy rehefa maditra. Nahoana? 1) Rehefa tsy voafehy ny ankizy, dia mandreraka an’ireo ray aman-dreniny. 2) Rehefa tsy mazava ny fitsipika apetraky ny ray aman-dreny, dia tsy hain’ny ankizy intsony izay tokony hatao.
Inona kosa ny vokany raha sazina araka ny antonony ny ankizy? Manitsy ny toe-tsainy izany, ary manampy azy ho hendry. Lasa matotra sy matoky tena koa izy rehefa lehibe. Aiza anefa no hahitanao toro lalana tsara, mba hitaizana ny zanakao?
Mandaitra ny toro lalan’ny Baiboly
Mino ny Vavolombelon’i Jehovah, izay namoaka an’ity gazety ity, fa ny Baiboly dia tena “mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, ary hanafaizana.” (2 Timoty 3:16) Tsy hoe boky natao hanampiana ny ray aman-dreny fotsiny ny Baiboly, fa manoro an’izay tokony hataon’ny mpianakavy rehetra mihitsy. Ireto misy ohatra:
HOY NY BAIBOLY: “Latsa-paka ao am-pon’ny zaza ny hadalana.”—Ohabolana 22:15.
Marina fa tsara fanahy sy mahafinaritra ny ankizy indraindray. Matetika anefa izy ireo no manao zavatra adaladala, ka mila famaizana. (Ohabolana 13:24) Raha mitadidy an’izany ianao, dia hitaiza tsara ny zanakao.
HOY NY BAIBOLY: “Aza misalasala manafay zanaka.”—Ohabolana 23:13.
Aza matahotra hoe raha sazinao araka ny antonony ny zanakao, dia hisy vokany ratsy aminy izany, na tsy ho tia anao izy rehefa lehibe. Raha ny fitiavana no antony anafaizanao azy, dia ho mora aminy ny hanetry tena sy hanaiky hahitsy. Ilainy foana izany toetra izany, na dia rehefa lehibe aza izy.—Hebreo 12:11.
HOY NY BAIBOLY: “Izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy.”—Galatianina 6:7.
Rariny raha te hiaro ny zanany ny ray aman-dreny. Ilaina anefa ny mandanjalanja. Tsy manampy ny zanakao mantsy ianao raha “miaro” azy tsy ho voasazy rehefa maditra izy. Hoatr’izany koa rehefa miteny aminao an’izay tsy nety nataon’ny zanakao ny mpampianatra, na ny olon-dehibe hafa. Tadidio fa manampy anao hanitsy azy ireny olona ireny. Mampianatra an’ilay ankizy hanaja olon-dehibe ianao raha manao an’izany, ka hanaja anao koa izy.—Kolosianina 3:20.
HOY NY BAIBOLY: ‘Mahatonga henatra ho an’ny reniny ny zaza avela hanaram-po.’—Ohabolana 29:15.
Manehoa fitiavana, aza ovaovana ny fitsipika apetrakao, ary aza hentitra be loatra
Marina fa tsy tokony hasiaka be ny ray aman-dreny, nefa tsy tokony ho goragora koa ny fitaizany. Hoy ny boky iray: “Rehefa avelan’ny ray aman-dreny hanao izay tiany fotsiny ny ankizy, dia tsy ho azony mihitsy hoe ny olon-dehibe no manana fahefana ao an-trano.” Raha tsy mandray andraikitra ianao, ka tsy asehonao fa ianao no manana fahefana ao aminareo, dia hihevitra ny zanakao hoe izay tiany no atao. Mbola tsy mahalala ny tokony hataony anefa izy ka tsy hanao safidy tsara, dia izy ihany no hizaka ny vokany, ary ianao koa halahelo.—Ohabolana 17:25; 29:21.
HOY NY BAIBOLY: ‘Hikambana amin’ny vadiny ny lehilahy, ary ho nofo iray ihany izy roa.’—Matio 19:5.
Milaza ny Baiboly fa efa mpivady ny lehilahy sy ny vehivavy vao tokony hiteraka, ary mbola tokony ho mpivady izy ireo na dia efa lehibe aza ny zanany ka miala ao an-tranony. (Matio 19:5, 6) Ny andraikitrao amin’ny vadinao àry aloha no tokony ho zava-dehibe aminao, izay vao ny adidinao amin’ny zanakao. Raha ny zanakao indray no ataonao ambony, dia hanambony tena izy ka ‘hihevi-tena mihoatra noho izay tokony hoheverina.’ (Romanina 12:3) Lasa tsy hifandray am-po koa ianareo mivady.
Ireto misy toro lalana hanampy anao hitaiza tsara ny zanakao:
Manehoa fitiavana: “Aza mampahatezitra ny zanakareo, mba tsy ho kivy izy.”—Kolosianina 3:21.
Aza ovaovana ny fitsipika apetrakao: “Aoka ny teninareo rehefa Eny dia Eny, rehefa Tsia dia Tsia.”—Matio 5:37.
Aza hentitra be loatra: ‘Hahitsiko araka ny antonony ihany ianao.’—Jeremia 30:11. *
^ feh. 21 Misy fanazavana fanampiny ao amin’ny www.jw.org/mg. Jereo ao amin’ ilay hoe FAMPIANARAN’NY BAIBOLY > MPIVADY & RAY AMAN-DRENY. Ho hitanao ao ireto: “Ahoana no Tokony Hifehezana ny Ankizy?”, “Ahoana Raha Mila Vaniny ny Zanakao?”, “Ampianaro Hahay Hitondra Tena Tsara ny Zanakao”, ary “Ampio ny Zanakao mba Hankatò.”
Aprily 2015 | Nahoana ny Ankizy no Lasa Tsy Voafehy?
MIFOHAZA! Aprily 2015 | Nahoana ny Ankizy no Lasa Tsy Voafehy?